China Crystal AB Rhinestone Banding Rhinestone miompana amin'ny famokarana Jeans sy ny orinasa | Erjiao
Tsara kalitao mangarahara kokoa Ss12 Ss8 Banding By The Y ...
Ambongadiny avo lenta plastika mangarahara Ss12 Ab T ...
Ambongadiny SS8 Hot Sales Rhinestone fanapahana, plastika ...
Crystal AB Rhinestone Banding Rhinestone miompana amin'ny ...
Shinoa SS6 Rhinestone Banding Triring, Crystal Rhi ...
Crystal AB Rhinestone Banding Rhinestone miompana amin'ny Jeans
Overview Quick Details Karazana vokatra: Rhinestones Fitaovana: Glass, Rhinestone Glass ary endrika plastika: Rhinestones boribory karazana: Loose Rhinestones teknika: Style manjaitra: Fampiasana Flatback: Kitapo, akanjo, kiraro, haingo Diy, Antoko, Cloythes, Hat, sns. Toerana niaviany: Zhejiang, Sina Anaran'ny marika: Maijiao Model Isa: 0650 Anaran'ny vokatra: Plastika Rhinestone Fampiasana: Kitapo kiraro akanjo T-shirt MOQ: 1600 metatra isaky ny loko Certificate: ISO Packin ...
Glass, Rhinestone Glass ary plastika
Kitapo, akanjo, kiraro, haingo Diy, Antoko, Cloythes, Satroka, sns.
Karakarao vita amin'ny plastika
T-shirt kitapo kiraro akanjo
1600 metatra isaky ny loko
Karatra 10 metatra
7-15 Andro fiasana
100000 Yard / yard isan-kerinandro
Karatra 10 metatra. 50 metatra horonana. 100 metatra ny horonana.
Quantity (Yard) 1 - 200000 > 200000
Banding vita amin'ny rhinestone
Fitaovana: Vato: vera kristaly A +
Loko: Kristaly, loko ary kristaly AB.
Fonosana: karatra 10 metatra, horonan-taratasy 50 metatra, horonan-taratasy 100 metatra.
Fandefasana: 3-15 andro fiasana
Antsipirian'ny fonosana: karatra 10 yard. Horonan-taratasy 50 yard. Horonan-taratasy 100.
Seranan-tsambo: Seranan'i Yiwu sy Seranan'i Ningbo
Tongasoa eto hahalala bebe kokoa momba ny orinasanay .——Yiwu Zhuyi firavaka fanaovana firavaka
1. 20 taona niainana tamin'ny famolavolana sy ny fampandrosoana.
2. Ny vokatra rehetra dia namboarina sy fanaraha-maso ny tontolo iainana.
3. Fitaovana fanaovana bobongolo mandroso sy mpiara-miasa amin'ny famokarana bobongolo.
4. Ny ambany indrindra MOQ sy ny vidin'ny orinasa.
5. Ny serivisy isaky ny serivisy tonga lafatra aorian'ny serivisy.
CLICK ETO Fahaizan'ny orinasa
F1: Inona ny vidiny sy ny MOQ?
A: Vidiny mivantana an'ny orinasa, ny MOQ dia 1600 metatra isaky ny loko.
F2: Azoko atao ve ny manafatra habetsany kely?
A: Eny, ekena ny habetsany kely.
F3: Ahoana ny fiantohana amin'ny kalitao?
A: Ny entana rehetra dia halefa alohan'ny hijerena ny kalitao ary handefa sary ho anao izahay hanamarinana, ary koa manana fanaraha-maso kalitao izahay ary afaka mandoa amin'ny alàlan'ny Trading Assurance izay ahafahan'i Alibaba mandray anjara amin'ny fifehezana ny kalitao amin'ny antoko fahatelo.
F4: manome ohatra ve ianao?
A. Eny, manome santionany maimaimpoana izahay.
F5: Aiza ny tsenanao?
A: Miorina amin'ny traikefa momba ny orinasa 10 taona, nanao orinasa izahay tamin'ny ankamaroan'ny tany (toa an'i Alemana, UK, France, Netherlands sns), Amerika Avaratra (USA, Canada sns) Azia (Japan, Korea, Malaysia sns), Aostralia, Nouvelle Zélande, Brezila sns.
F6: Ahoana no andoavako ny fividianako?
A: Azonao atao ny mandoa amin'ny carte de crédit, Bank, Western Union ary Paypal sns.
F7: Inona ny fe-potoana fandoavanao vola?
A: petra-bola 30%, karama fandanjana 70% alohan'ny fandefasana.
F8: Mandra-pahoviana ny ora fanaterana?
A: Ho an'ny kaomandy kely dia matetika eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 andro, ho an'ny baiko lehibe dia mila 3-15 andro.
F9: Mandra-pahoviana ny fotoana fitaterana?
A: Raha ny mahazatra dia 7 andro eo ho eo no ilaina, fa ho an'ny faritra lavitra sy ny firenena dia maharitra 7-15 andro fiasana.
F10: Misy laharana fanarahana ny kaomandiko?
A: Eny, alefanay ny entana rehetra miaraka amin'ny laharan'izy ireo ary afaka jerenao ny satan'ny fandefasana amin'ny tranokala mifandraika amin'izany.
CLICK ETO EFA FIDERANAO FANONTANIANA
●20 taona niainana tamin'ny famolavolana sy ny fampandrosoana.
● Ny vokatra rehetra dia namboarina sy fanaraha-maso ny tontolo iainana.
● Fitaovana fanaovana bobongolo mandroso sy mpiara-miasa amin'ny famokarana bobongolo.
CLICK ETO HOMEPAGE
●Ny ambany indrindra MOQ sy ny vidin'ny orinasa.
●Ny serivisy isaky ny serivisy tonga lafatra aorian'ny serivisy.
Previous: Vongam-pandehan'ny plastika ambongadiny vita amin'ny volo vita amin'ny plastika SS6 Rhinestone Banding mamintina akanjo
Manaraka: Vongam-bato vita amin'ny plastika vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy vita amin'ny vatosoa any Goatemalà
Mpamatsy rojom-borona ambongadiny, rhinestone ...
Purpler malaza plastika Rhinestone Banding Roll ...
Cheap Crystal Plastika mamintina Rhinestone Bandi ...
Rhinestone Chain mametaka ambongadiny plastika Rhi ...
Orinasa ambongadiny maivana hazavana volomparasy volomparasy ...